Sanatar Xuseen: Dhameystirka dastuurka waxaa dib u dhigaya khilaafka siyaasadeed ee dalka – Kalfadhi
Sanatar Xuseen: Dhameystirka dastuurka waxaa dib u dhigaya khilaafka siyaasadeed ee dalka
Xoghayaha Guddiga Dub-u-eegista Dastuurka Ku-Meel-Gaarka ah ee Baarlamaanka Soomaaliya, Sanatar Xuseen Sh. Maxamuud, ayaa u sheegay Kalfadhi in khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Dowlad Goboleedyada uu dib u dhac ku keenay shaqadii dib u eegista dastuurka ahayd ee ay ku hawlanaayeen. Waxa uu sheegay in isku haysashada siyaasadda ay jid-gooyo ku noqotay sii wadista ka shaqeynta dastuurka, oo ay uga dhiman tahay 5 cutub iney dib u eegaan.
Sanatarku waxa uu sheegay in dastuur la qoro ama dib loo eego ay u baahan tahay inuu jiro isfaham siyaasadeed oo ay yeeshaan siyaasiinta dalka, “waana tan keentay” buu yiri “inaan markasta dib u dhacno”. “Caqabadda koowaad khilaafkan waaye (khilaafka DFS iyo Dowlad Goboleedyada), waxaana rajeyneynaa inuu dhamaado, siduu hadda Aqalka Sare sheegaay” ayuu yiri Sanatar Xuseen Maxamuud. Aqalka Sare waxa uu DFS u gudbiyey tabashada Dowlad Goboleedyada oo qodobbeysan, taas oo ay Dowlad Goboleedyadu soo dhaweeyeen, balse DFS wali kama soo jawaabin.
Xoghayaha Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Sanatar Xuseen Maxamuud, waxa uu Kalfadhi u sheegay in, iyada oo ay khilaafyo siyaasadeed jiraan, ay haddana guulo waa weyn ka soo hooyeen ka shaqeynta dastuurka. Waxa uu sheegay in, 10-ka cutub ee dastuurka ka mid ah ee ay dib u soo eegeen, kuna wareejiyeen Guddiga Dastuurka ee Madaxa-banaan, ay ahaayeen kuwii ugu dhibka badnaa, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan Guddiga Dastuurka ee Madaxa-banaan u gudbinay cutubyada ka hadlaaya heykalka dowladnimada, waxaan rajeyneynaa iney dib noogu soo celiyaan, kadibna aan la-tashiyo ka sameyno, inteynaan u gudbin Baarlamaanka Soomaaliya” ayuu Sanatar Xuseen u sheegay Kalfadhi.
Rajada fiican ee uu Xoghayuhu ka qabo iney dib u eegista dastuurka dhameeyaan bartamaha sanadka soo socda oo uu horay ugu sheegay Kalfadhi, waxaa barbar socda Wasaarsdda Dastuurka oo hadda bilowday iney hay’ado maxaliya siiso mashaariic dadka lagu baro xuquuqdooda dastuuriga ah, taasoo inta badan looga hadlayo 5-ta cutub ee ay hadda ka hawlgalayaan Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Wasaaradda Dastuurka waxay ka shaqeeneysaa in inta aysan Guddiyada Dastuurku u tagin muwaadiniinta ay wax ka sii ogaadaan dastuurka iyo sida uu u caddeeyey xaqooda muwaadannimo.
Wasaaradda Cadaaladda oo isu diyaarineysa iney soo dhisto Guddiga Ladagaalanka Musuqa
Golaha Aqalka Sare oo markii ugu horreysay la hor geeyey maanta Hindisaha Sharciga Naafada